musha Europe Vatambi Vanotamba Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara YeTennis Super Star ine zita rekuti “Mari". Yedu Simona Halep Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Simona Halep Yevacheche Nyaya- Iyo Ongororo Kusvikira.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndiye mumwe wevanobudirira nyanzvi tennis vatambi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveSimona Halep's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, Simona Halep akazvarwa pazuva re27th raGunyana 1991 kuConstanta muRomania. Iye aive wechipiri pavana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Tania Halep uye kuna baba vake, Stere Halep.
Simona Halep Vabereki Stere naTania.
Nyika yeRomania yerudzi chena ine midzi yeAromanian yakasimudzwa kwaakaberekerwa muConstanta kwaakakurira pamwe chete nemukoma wake, Nicolae nehanzvadzi yake, Luminita. Kukura kuConstanta, Simona mudiki aisazivikanwa semunhu anofarira zvemitambo kudzamara atanga kuperekedza amai vake kunoona dangwe ravo - Nicole achidzidzira tenesi.
Izvo hazvina kutora nguva yakareba ipapo iyo 4-gore-yekutanga akaisa maoko pachivharo uye akada nzira iyo bhora rakakwidzwa padare. Ndokubva kwatanga kudzidziswa kwaSimona kwekutanga mune tennis. Pakasvika nguva iyo musikana wechidiki akange ave zera 6 akatanga kudzidzira tennis zuva nezuva uye akatarisira ramangwana rakanaka mune Mutambo.
Simona Halep akatanga kutora tenisi zvakakomba kubva panguva yemakore matanhatu.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Dzidzo neKubata Buildup
Mhuri yedzidzo yaSimona inosanganisira zvidzidzo zvake kuGheorghe Ţiţeica muConstanta. Munguva yake ye 8 yegore yekudzidza pachikoro ichi, Simona mudiki akasanganisa vadzidzi vemitambo nekutamba bhora remaoko semumwe mutambo
Nguva zvakare yakaona mudiki Simona achigamuchira kudzidziswa tennis kubva kune wake wekutanga murairidzi, naStan nevamwe vazhinji vakamusvitsa mukana wekutora chikamu mumitambo yenyika pamwe nevekunze kwavakakunda vashoma.
Simona Halep aine mukombe kubva kune mumwe wevadiki vake makwikwi.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Basa Rokutanga Upenyu
Nhoroondo yekutamba kwakakosha kwaSimona mumutambo wetennis wakadzokera kune gore 2005 paakakunda junior roll Roland Garros pazera remakore gumi nemana. Akaenderera mberi achitamba pamakwikwi mazhinji epamusoro ekuvandudza 'International tennis Federation' (ITF) mu14 uye akahwina mashoma.
Makwikwi ekutanga anosanganisira maviri madiki madhora 10,000 mamakisi muBucharest akamiririra Elena Bogdan naStéee Vongsouthi pamwe nekukunda kumutambo we $ 25,000 muSweden uko Simona akakunda wechishanu-seeded Anne Schaefer mumafainari.
Simona Halep akapinda mumakwikwi mazhinji muna2009 kusanganisira mutambo we $ 25,000 muSweden.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Mumashure emabasa epamberi ekuedza basa rakaona Simona achiedza kupinda mukukwikwidza kumakwikwi eWTA uye epamusoro sosi Grand Slam kuRoland Garros asi akakundikana mukirabhu yechipiri yevadzidzi vaviri mugore ra2009.
Chibayiro chake chikuru che tennis chakauyawo mugore rimwe chete (2009) paakaita kuvhiyiwa kwekudzikisa mazamu nechinangwa chekuwedzera nyaradzo yemuviri panguva yemitambo nekutamba.
Simona Halep akave nekuvhiyiwa kwekudzora zamu muna2009 kuti awedzere kuita kwake panguva yemitambo.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Kumuka Mukurumbira Nhau
Achienderera mberi, Simona akarekodha fambiro mberi yakasimba kusvika kumusoro kutanga kubva pagore 2010 paakakwanira French Open uye gare gare main draw yeUS Open. Mu2011, iye akasvika kuma quarterfin eASB Classic kwenguva yekutanga yebasa rake uye akaenderera mberi nekuchengetedza nzvimbo mune semifinals yeiyo 'WTA' chiitiko mu2012.
2013 raive gore rakaverengerwa Simona Nha. 11 pane irwo pasi runyorwa rwevakadzi tennis players mu2013-2014. Akavawo mutambi akakurumbira wegore mune ese 2014 uye akarekodha zvakafanana zvakafanana mu2015.
Simona Halep akatumidzwa WTA mutambi anonyanya kufarirwa wegore muna 2014 na2015.
Taura nezverwendo rurefu rwaSimona kuhwina mukombe wakakura, akareketa kurasikirwa kwakateedzana kumafainari a2014 na2017 French Open pamwe neyekupedzisira 2018 Australian Open. Yakanga isati yasvika gore ra2018 apo akahwina mukombe wake wekutanga mukuru kuFrance Vhura uye akasimbiswa pakubudirira kwake kwekutanga nekuhwina zita rake rekutanga reWimbledon gore rinotevera (2019). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Simona Halep akahwina iyo Wimbledon kekutanga mu2019.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Relationship Life Facts
Simona Halep achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve iye kufambidzana nhoroondo uye ikozvino hukama mamiriro. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Simona Halep akabatanidzwa ne2 chiRomania tennis players anosanganisira Horia Tecau naRadu Barbu.
Kunyangwe hazvo Simona akamboonekwa achienda kuzororo naRadu Barbu paIitaliana Riviera, haana kubuda kuti ataure nezvehukama hwavo panguva yekunyora. Nekudaro, hazvigone kunyorwa zvakarongeka kana ivo duo vari kufambidzana, uye Simona haana Mwanakomana (s) kana mwanasikana (vakaroora) kunze kwemuchato panguva yekunyora.
Simona Halep nemumwe wemukomana wake runyerekupe Radu Barbu.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Simona Halep anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaSimona Halep: Stere Halep ndibaba vaSimona. Iye aimbove mutambi wenhabvu akatambira Segeata Stejaru mumaligi ezasi ndokuenderera mberi nekumhanyisa fekitori yezvigadzirwa zvemukaka muRomania. Simona agara ari padyo nababa vake uye zvinonzi akapa mari yaaida kuchengetedza bhizinesi rake remukaka ririmupenyu parange risiri kuita zvakanaka mu2015.
Simona Halep nababa vake Stere Halep.
Nezve amai vaSimona Halep: Tania Halep ndiamai vaSimona. Ivo amai vanogara-pamba vaigovana muhope dzaSimona dzehudiki dzekuhwina Wimbledon uye vakamukurudzira kuti asvike kumagumo echiitiko ichi. Muchokwadi, Simona akaburitsa pachena kuti kuhwina Wimbledon kwaive kurota kwaTania kwaari. Hazvishamise kuti Tania akaunzwa misodzi muna Chikunguru 2019 apo Simona akaunza kurota kwacho.
Simona Halep naamai vake Tania.
Nezve hama yaSimona Halep: Simona Halep ane mukoma mukuru anonzi Nicolae uye hanzvadzi inozivikanwa saLuminita. Nicolae ane makore matanhatu-kukura kuna Simona uye akamukurudzira kuti atange kutamba tenesi asi haana kutendeuka nyanzvi mumutambo. Iye anochengetedza hukama hwepedyo naSimona uye anoshanda seimwe yeakanyanya kukurudzira.
Simona Halep nemukoma wake Nicolae.
Nezve Hama dzaSimona Halep: Kure kubva kumhuri yepedyo yaSimona, zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake nasekuru nasekuru naambuya. Aive nemunin'ina wake anonzi Nicica uyo akazviuraya munaKurume 2015. Muzukuru wake ndiTania (akaberekerwa munin'ina wake Nicolae) nepo zvishoma zvichinyatso kuzivikanwa nezve vazukuru vake panguva yekunyora. Saizvozvo, vanatete vaSimona nasekuru vake havana kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Simona Halep abike ... Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemufananidzo uzere wake. Kutanga, hunhu hwaSimona musanganiswa weRibra zodiac maitiro.
Akashinga, anofara uye haawanzo kuburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Kuvaraidza kwaSimona uye zvaanofarira zvinosanganisira tsiva, nhabvu, kutamba ruoko, kuteerera mimhanzi uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Bhokisi nderimwe remafariro aSimona Halep.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Lifestyle Facts
Simona Halep ane mari inofungidzirwa kuti inodarika emadhora gumi nemana panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaSimona kunobva mukuedza kwake tenisi uye zvibvumirano zvekutsigira apo ongororo yemashandisiro ake maitiro inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kunongedzera zvinongedzo kuhupenyu hwoumbozha hwaSimona hunosanganisira imba yake inoshamisira muConstanta inodhura $ 573,065. Imba inozvirumbidza yepasi pevhu, pasi pevhu uye pekutanga pasi ine mamiriro ehunyanzvi maficha ayo ese anogara pane 460 mativi emamirimita. Taura nezveunganidzwa wemotokari dzaSimona, inosanganisira vatasvi vemhando yepamusoro seMercedes AMG SL63, Range Rover, Porshe 911 pakati pevamwe vatasva vekunze.
Simona Halep posing padhuze naye Mercedes AMG SL63.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Untold Facts
Kuputira yedu Simona Halep's biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi izvo zvisina kana kubatanidzwa mune yake bio.
Simona haana maTattoos panguva yekunyora uye anorova vateveri seumwe waizochengetedza muviri usina inki kwehupenyu hwake hwese.
Nezve chitendero chake, Simona akazvarwa uye akarerwa semuRomania or Christian Christian. Zvikuru, anobvuma chitendero sechinhu chakakosha muhupenyu hwake. Iye zvakare mugamuchiri wePatriarchal Cross yeRomania uye Order ye Star yeRomania.
Simona Halep achigamuchira Patriarchal Cross inova ndiyo musiyano wepamusoro weRomanian Orthodox Church.
Haana kuonwa achinwa zvinwiwa zvinodhaka, kunyangwe panguva yemhemberero. Uye haana kupihwa kuputa.
Simona akapihwa mubairo weCetățean de onoare ("Honorary Citizen") weguta reBucharest mu2018.
Simona Halep achipihwa mubairo we "Honorary Citizen") weguta reBucharest mu2018.
Iri zita Simona rinoreva munhu anonzwa nepo Halep iri musiyano weAleppo, guta riri kuchamhembe kweSyria.
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Simona Halep Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!